जापान जान अनलाइनबाट भाषा परीक्षा दिन पाइने « News24 : Premium News Channel
जापान जान अनलाइनबाट भाषा परीक्षा दिन पाइने
प्रकाशित मिति : Nov 01, 2018
काठमाडौँ । जापानमा जान चाहने नेपालीले पहिलो पटक अनलाइनबाटै जापानी भाषा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जापानको प्राक्टिकल जापानीज कम्युनिकेसन (पिजेसी) ब्रिजसँग सहकार्य गरी अनलाइनबाटै भाषा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी मोग सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमहरि प्रजापतिले जानकारी दिए ।
कागजबाट लिखित परीक्षा दिँदा नतिजाका लागि तीन महीना पर्खनुपर्नेमा अनलाइनबाट परीक्षा दिनेबित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ । सोको प्रमाणपत्र १० दिनमा लिन पाइनेछ । परीक्षामा उपयुक्त लब्धाङ्क नआएको एक हप्तापछि अर्को परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था छ ।
जापानको न्याय मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले मान्यता दिएको पिजेसीले सन् १९७६ देखि नै परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही संस्थासँग मोगले सहकार्य गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । मोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजापतिका अनुसार विद्यार्थीबाहेकले पनि भाषा परीक्षा दिने पाउनेछन् । परीक्षा शुल्क रु तीन हजार ५०० लाग्छ । परीक्षा अनलाइनबाट जति बेला पनि दिन सकिन्छ ।
साउदी अरबसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्छःमन्त्री गोकर्ण विष्ट
नेपाली कामदार जापान पठाउन औपचारिक छलफल, थप गृहकार्य गर्ने सहमति
नेपाललाई ‘एजुकेशन-हब’ बनाउनेगरी प्रतिवेदन आएको छ !
माघ ४ गते ‘अल्फा बिटा अष्ट्रेलिया एजुकेसन फेयर’ !
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएकाे अनियमितता बारे छानविन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन
‘निजी विद्यालय भाग्ने अवस्था आउँछ’ – प्रधानमन्त्री ओली